निवर्तमान (Nibartaman) ||: June 2016
सरकारको वाषिर्क कार्यतालिका अनुसार यसपाली पनि सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवस्थापिका संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष२०७३/०७४ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरणको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षा लागि रु. १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको जम्बो बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षो तुलनामा यो बजेट २८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षनेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रु. ८ खर्ब १९ अर्ब ४७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । यस वर्षो कूल बिनियोजित बजेटमध्ये चालर्ूखर्च तर्फरु. ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड अर्थात् ५८.९ प्रतिशत, पू“जीगत खर्चतर्फरु. ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड अर्थात् २९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन -आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सा“वाब्याज भुक्तानी) का लागि रु. १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड अर्थात् ११.४ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ । यसरी भूकम्पका कारण क्षत्रि्रस्त भौतिक सम्पत्तिहरुको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणमा केन्द्रीत भनिएको बजेटको पू“जीगत खर्च एकतिहाई भन्दा कम हुनु र बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेटिएता पनि स्पष्ट आर्थिक संभाव्यता नभएका कारण बजेट केही हदसम्म वितरणमुखी र धेरै हदसम्म भाषणमुखी देखिएको छ ।